Tun Tun, Author at Chelmo News Portal
Author: Tun Tun
Home›Author: Tun Tun
ယခုခေတ် လူငယ်တွေက တော်ရုံနဲ့ လက်မထပ်ကြတော့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ ပြောစရာတောင်မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကုန်စျေးနှုန်းကကြီး စားစရိတ်နေစာရိတ်ကို ဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် စဉ်းစားနေရလို့ပါ။ ဒါပင်မဲ့ အသက်ငယ်ငယ်မှာ လက်ထက်ရင် အကျိုးရှိမယ့်အကြောင်းလေးတွေကိုလည်း တင်ပြပါရစေ။ ၀၁. နှစ်ယောက်အတူတူနေတော့ အိမ်လခ သက်သာပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီး နှစ်ယောက်အတူတူ အလုပ်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံစုမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်လခလည်း သက်သာမှာ ...
ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ အတွက် ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ (၇)ချက်
Harvard Research အရ ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုရင် ကျင့်ကြံပြုလုပ်ရမဲ့ အချက် (၇) ချက်ပဲ ရှိပါတယ်နော်။ ၀၁။တရားထိုင္ပါ ပုံမှန်တရားထိုင်ပေးခြင်းက ဦးနှောင်္က်ကိုပြန်လည်နုပျိုစေပြီး သိသိသာသာ ပျော်ရွှင်မှုတိုးမြှင့်လာစေပါတယ်။ ၀၂။ၾကင္နာတတ္ပါ Altruism (ပရဟိတဝါဒ) လို့ခေါ်တဲ့ မိမိ်အကျိုးထက် အများအကျိုးကို ဦးစားပေးတာက စိတ်ဖိစီးမှုသောကတွေကို လျှော့ချပေးတဲ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုသောကတွေကိုလျှော့ချပေးတဲ့အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကိုလဲ ...
အချိုစားသုံးခြင်းကိုလျော့ချရင် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်မြန်မြန် ကျနိုင်ပါတယ်။ Chris Patt ခြောက်လအတွင်းမှာ ပေါင် ၆၀ ချနိုင်ခဲ့တဲ့ သူပါ။ Gurdians of The Galaxy ဇာတ်ကားထဲက မင်းသား လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ Diet plan အဓိကကတော့ ရေများများသောက်ခဲ့ပါတယ်။ Gym သွားမယ့်အစား ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ ...
“ထစ်ခနဲရှိ တို့နှစ်ယောက် ရန်တွေဖြစ်…. အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာပြီး ရန်တွေဖြစ်…ချိန်းတွေ့တိုင်းလည်း ရန်တွေဖြစ်.. ဒီမှာ ဖုန်းလေးမအားလိုက်နဲ့ ရန်တွေဖြစ်..အင်တာနက်ပေါ်မှာ chat နေမိခဲ့ရင် ပျက်မှာပဲဆိုပီး ရန်တွေဖြစ်…မိန်းကလေးအပေါင်းသင်းနဲ့ နှုတ်ဆက်မိလိုက်လို့ ရုတ်တရက်ကြီးထရန်တွေဖြစ် ” စိုင်းစိုင်း သီချင်းဆိုပြတာ
ဇူလိုင်၂၂ရက်နေ့ မနက်၁၀နာရီခန့်က ဆိုးလ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာ ဆောင်းဂျွန်ကီနဲ့ ဆောင်းဟေကိုတို့ နှစ်ဦးသဘောတူ တရားဝင်ကွာရှင်းရန်အတွက် အစဉ်အလာအတိုင်း တံခါးပိတ်သီးသန့်ကြားနာမှု လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ဘာဝတ်ရမှန်း မသိတဲ့ ပျိုမေတွေ အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
2020မှာ ခေတ်စားလာမယ့် Makeup Look များ